Xiriirka Kubadda Cagta Spain oo shaaca ka qaaday xilliga la filayo in la soo gaba gabeyn doono horyaalka La Liga – Gool FM
(Spain) 17 Mar 2020. Madaxweynaha Xiriirka Kubadda Cagta Spain ee Luis Rubiales ayaa shir jaraa’id uu ka soo muuqday wuxuu la hadlay warbaahinta, kaddib markii si rasmi ah loo shaaciyay in dib loo dhigay koobka Euro sanadka xiga ee 2021, isaga oo shaaca ka qaaday horumarkii ugu dambeeyay iyo qorshayaasha soo socda.
Shirkan ayaa yimid saacado kaddib markii uu xiriirka kubadda cagta Yurub ee UEFA uu go’aansaday inuu dib u dhigo qabsoomida koobka Euro sanadka xiga ee 2021, kaasoo ah war si weyn uga caawin doona horyaalada Yurub inay dhameystirmaan kahor inta uusan bilaabanin xilli ciyaareedka kal ee cusub.
Haddaba Luis Rubiales ayaa wuxuu shaaca ka qaaday inuu rabitaan xoogan ka dhex jiro xiriirka kubadda cagta Spain, si loo dhammaystiro horyaalka La Liga dhamaadka bisha June ee soo socota.
Hadalka Luis Rubiales oo lagu daabacay bogga rasmiga ah Twitter-ka ee Xiriirka Kubadda Cagta Spain iyo wargeyska “Marca” ayaa waxaa uu yiri:
“Waa inaan dhameystirnaa horyaalka Spain, haddii ay macquul tahay ka hor 30-ka bisha June, inkastoo taariikhdan aysan aheyn waqtiga kama dambeysta ah”.
“Ma ogaan karni mustaqbalka, laakiin waan u dagaalami doonnaa arrintan bar-tilmaameedka inoo ah”.
“Waxaan u aragnaa inaysan cadaalad aheyn in la joojiyo horyaalka waqtigan la joogo, rabitaankeena ayaa ah inaan dhameystirno tartankan, waxaa ina taageeri doono dhamaan madaxda gobolada kala duwan, waxaana ka mahad celineynaa kalsoonidooda”.
“Laakiin waxaa jira saddex waxyaabood oo ay tahay inaan ka shaqeyno kuwaas oo ah caafimaadka, dhaqaalaha iyo tartamada isboortiga, waa inaan diirada saarnaa dhamaantood”.
“Laakiin waxaan nafteena ku abuureynaa rajada iyo aragtida xiriirka kubadda cagta adduunka iyo xiriirka Yurub, waxaana ka mahad celineynaa go’aanka Guddiga Caalamiga ah ee Ciyaaraha Olympic-kada, kaasoo ah inaanu isku dhiibin dhibaatada hadda jirta.”
Ciyaaryahankii labaad ee ka tirsan kooxda Juventus oo laga helay caabuqa Coronavirus